Etu esi eji ihe omuma ihe na peeji nke Mac | Esi m mac
Olee otú iji gosi atụmatụ na Peeji nke Mac
Maka ndị ọrụ Mac kachasị nso, ka anyị mara na ndị otu anyị nwere ngwa ọrụ ọfịs dị mkpa iji rụọ ọrụ ọ bụla dị mkpa, agbanyeghị na anyị nwekwara ike ịbanye n'ọrụ ndị ọzọ dị mgbagwoju anya.
Anyị na-ekwu maka ngwungwu ngwa ahụ, nke "ndị ochie nke ebe ahụ" maara dịka iWork. Nke ahụ bụ, anyị nwere Peeji, Ọnụ Ọgụgụ na Isi Okwu iji rụọ ọrụ anyị. Peeji dị mfe, obere okwu nhazi okwu nke enweghị ihe ọ bụla ga-enwere nnukwu aha na ahịa. Taa, anyị ga-ama otu esi eji ọrụ ihe ngosi, otu esi ewepụ ya na otu esi arụ ọrụ ya ngwa ngwa site na ogwe ngwaọrụ ma ọ bụ ụzọ mkpirisi keyboard.
Ihe mbụ ị ga - eme ma ọ bụrụ na ịnweghị budata Peeji bụ ibudata ya na Mac App Store peeji nke. Mgbe ahụ emeghe akwukwo ma ọ bụ dee otu (ị nwere ike ibubata faịlụ okwu)
Ugbu a, site na enyemaka nke cursor ahụ, kaa akụkụ ahụ ịchọrọ akara ma gosipụta ya na acha anụnụ anụnụ.
Na-esote, ị ga-agarịrị na ogwe ngwaọrụ wee pịa Fanye. Otu n'ime nhọrọ ikpeazụ bụ Gosiri. Site na ịpị ya, ederede ahọpụtara ga-apụta ìhè na edo edo.
O doro anya na ị ga-achọ ịkọwapụta ihe ederede ma mee ya dị mfe. N'etiti ederede na bọtịnụ na-egosi na mmanya ikwu. Ga-ahụ bọtịnụ na-egosipụta. Akara akụkụ ọhụrụ nke ederede ahụ dị ka ọ dị na 2 wee pịa Mee ka ọ pụta ìhè na mmanya kwuru. Ọ dị mfe, ị nwere ike akara akụkụ niile ịchọrọ.
Agbanyeghị, anyị nwere ike iji ụzọ mkpirisi keyboard eme ihe mgbe niile. Anyị kọwapụtara ederede ka ọ pụta ìhè dị ka isi nke abụọ wee pịa ụzọ mkpirisi igodo ndị a: Mgbanwe + Cmd + H.. Ozugbo emere nke a, ederede akara ga-adịgide.
N'ikpeazụ, nhọrọ nke na-eju m anya na usoro a dum. Ihichapụ ederede ederede dị mfe dị ka ịpị otu ederede ederede na ịpị hichapụ na menu menu nke gosipụtara. Dị mfe dị ka nke ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Olee otú iji gosi atụmatụ na Peeji nke Mac
Ana m ekele gị nke ukwuu maka ndụmọdụ a, debe ya
Zaghachi Carlos Jimenez
Olee otú ịgbanwe agba nke gosi? Ma ọ bụ naanị na-akwado edo edo? Daalụ.
Mahadum Stanford na-akwalite iji Apple Watch na ọgwụ
Musique bụ ihe ọkpụkpọ dị iche maka Mac